Mbola manana fepotoana 2’05’’ eo alohan’i Médéric Clain, izay mpifanandrina akaiky aminy eo amin’ity fihodinana am-bisikileta an’i Madagasikara ity. Omaly dia i Cedric Gasnier (teratany renioney) no nandrobaka ny andiany fahefatra, izay nihena ho 50 km raha tokony ho 75 km eo noho ny haratsian’ny lalana eo amin’ny fihodinana an’Ambalavao.
Tafiditra ho laharana faharoa tamin’izany i Herizo Andriamihaja, izay niara-niditra tamin’ny Jean de Dieu Rakotondrasoa na Ravoatabia. Anio dia ny lalana miholakolaka miala avy ao Fianarantsoa mihazo an’Ambositra no hifaninanan’ireo mpihazakazaka. Mahatratra 101 km ny halaviran-dalana amin’izany, izay hanjakan’ny fiakarana. Amin’ity dingana fahadimy ity vao tena ilana ireo mpianika tendrombohitra toa an-dry Emile Randrianantenaina, izay efa nahazo ny akanjoba mifandraika amin’izany tamin’ny dingana fahefatra teo.
Dina Razafimahatratra et Roméo Andriamihaja